Gọọmenti ala Naịjiria ekwuputego mkpebi ya maka ịkwụsị kpam kpam akparamagwa ọ bụna na-ewete mmegbu ma ọ bụ ịkpa oke megide ụmụ nwanyị. A na-agba mbọ ịhụ n’iwu na usoro ọchịchị nke ala Naịjirịa gbadoro ụkwụ n’iwu na usoro ọchịchị nke mba ụwa gbasara ọnọdụ ụmụ nwanyị.
Gọọmenti ala Naịjiria ekwuputego mkpebi ya maka ịkwụsị kpam kpam akparamagwa ọ bụna na-ewete mmegbu ma ọ bụ ịkpa oke megide ụmụ nwanyị. A na-agba mbọ ịhụ n’iwu na usoro ọchịchị nke ala Naịjirịa gbadoro ụkwụ n’iwu na usoro ọchịchị nke mba ụwa gbasara ọnọdụ ụmụ nwanyị. Onye minista na-ahụ maka mmepe na agam n’ihu ụmụ nwanyị, bụ Zaniab Maina, kwuputere nke a n’Abuja.
Maina kwuru si na na-agbanyeghị n’ala Naịjirịa na-agbalị n’ihe gbasara ịnye ụmụ nwanyị oke nke ruuru ha, a ka nwere ọtụtụ ọlụ e kwesiri ịlụ n’ịnye ụmụ nwanyị ezigbo ọnọdụ obibi, yana ịkwụsị mmegbu na ịkpa oke megide ụmụ nwanyị.
Maina gbakwụnyere na ya nwere olile anya na Naịjirịa ga-abụ obodo ebe ịkpa oke na-adịghị, ebe ụmụ nwanyị ga na-enwete ezigbo agụm akwụkwo, na-ekwu uche ha, ma na-esonye n’usoro ọchịchị obodo, na-enweghị ịkpa oke ọ bụna megide ha.
Ooni Nke Ifè Etoola Obianọ Maka Atụmatụ Ọrụ Mmepe Ya
Nwa amadi ahụ bụ Ooni n'Ifè, bụ Ọba Adeyeye Enitan Ogunwusi akọwaala aka na-achị steeti Anambra bụ...
Ndị Channels Television na-akọwa na mmadụ abụọ ndị otu Boko Haram anwụọla na Steeti Kanọ. Nke a me...
Obianọ Abagidela Imemila Nsogbu Iju Mmiri n'Ọnịsha
Aka na-achị steeti Anambra bụ gọvanọ Willie Obianọ amalitela ịbagide n'amụma imemila ajọ nsogbu id...
Nri bụ nwata hụ ọ gbakee, ma bụrụkwa okpo hụ ọ jụrụ. Ọ bụ erighị ma sịṅebuna, n'ebe mmadụ na ihe ọ...
Ndị Fụlani Awakpokwala Enugu Ọzọ, Gbukasịa Onye Nche
Dịka nke ha mere na mgbe gara aga ji nwayọ na-ajụ oyi, ndị Fụlani na-achị ehi awakpokwala obodo ...
Ndị Ụga Echiela Obianọ "Dike Ifè n'Ụga"
Ọ bụ nnukwu oke mmemme ma bụrụkwa ihe oke ọñụ, dịka ndị obodo Ụga niile gbakọtara wee chibe aka na...
Gọvanọ Obianọ Emezuona Nkwa O Kwere -- Victor Umeh
Onye isi otu pati APGA n'ala anyị n'oge gara aga, ma bụrụkwa onye isi otu ịchụ nta nkwado maka ịhọ...
Ọchịchị APC Ejighị Ndụ Ụmụ Mmadụ Kpọrọ Ihe - Ọhuabụnwa
A kọwaala otu ndọrọ ndọrọ APC dịka otu ejighị ndụ ụmụ mmadụ kpọrọ ihe ma ncha. Onye nnọchite anya ...
Ndị Enugwu-Ukwu Echiela Okeke "Ezuo Nke Abụọ"
Osote aka na-achị steeti Anambra bụ Dọkịnta Nkem Okeke abụrụla onye e chibere echichi dịka "Ezuo N...
APC enwena mmeri a hụrụ anya na Steeti Edo
Ndi jiri aha otu All Progressives Congress (APC) zọọ ọkwa onye isi oche na Steeti Edo enwetego nme...
Ndị Ụmụeri Emee Mmemee Iri Ji Ọhụụ Ka Ọ Gachara Ahọ Iri Abụọ Na Abụọ...
Nke bụ nnukwu oke ọñụ dara nnọọ n'obodo Ụmụeri nke dị n'okpuru ọchịchị 'Anambra East' na st...